JINGHPAW KASA: ထူးချွန်ထက်မြက်သော အာဇာနည်
ဤပုံကို ကြည့်ကြစို့။ စစ်ပွဲ၌ထူးချွန်ပြီး၊ အားကျအတုယူဖွယ် အဖိုးတန်မျိုးချစ် KIA ရဲဘော် သတ္တိခဲလေး ဇင်ထုံးနော်အောင် ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်က ရှမ်းပြည် မုန်ဂူနယ်၊ မန်ဂျပ်ကျေးရွာ အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ပွဲတခု၌၊ ရဲဘော်ဇင်ထုံးနော်အောင်သည် သူတဦးတည်း၊ ထိုးစစ်ဆင်လာသော အစိုးရ စစ်တပ်မှ ရန်သူများကို ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရန်သူမြောက်များစွာ သူ၏ ကျည်ဆံနှင့် သေပွဲ ဝင်ခဲ့ကြရသည်။ ရန်သူတို့သည် တအုပ်ပြီးတအုပ် ရှေ့ကိုတိုး၍တိုး၍ ချီတက်ကြသကဲ့သို့၊ ဇင်ထုံးနော်အောင်သည်လည်း ခံစစ်၌ တဦးတည်း အင်တိုက်အားတိုက် ခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေစဉ်၊ သူ၏ကျည်ဆံများ ကုန်သွားခဲ့သည်။
ရန်သူတို့သည် အုပ်လိုက် ဆက်လက်ချီတက်လာနေသော အခါ၊ ရက်စက်ယုတ်မာ သော ရန်သူ၏ လက်ချက်နှင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခြင်းဖြင့် အသေမခံလိုသော သူရဲကောင်း မျိုးချစ် KIA ရဲဘော်လေး ဇင်ထုံးနော်အောင်သည်၊ တထောင့်တည်းကျန်ရှိသော ကျည်ဆံဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် လိုက်လေသည်။ ဤအမှုအရာသည်၊ “အောင်နိုင်ခြင်း” နှင့် ကချင်လူမျိုး တို့၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်သူတို့သည် တဖက်မှ သေနတ်သံတိတ်သွားပြီ ဖြစ်၍ အလွယ်တကူ ချီတက်လာကြသော အခါ၊ သူတို့ကို ခုခံတိုက်ခိုက်နေသူမှာ တဦးတည်းဖြစ်၍၊ ကျည်ဆံကုန်သွားသောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သတ္တိရှိရှိ တထောင့်တည်း ကျန်ရှိသော ကျည်ဆံနှင့် အဆုံးစီရင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ကြရလေသည်။
မူစယ် ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိလာကြသော ထိုတိုက်ပွဲမှ ဒဏ်ရာရ အစိုးရ တပ်မတော် သားတို့ အချင်းချင်း ပြောစမှတ်ပြုကြသည်မှာ၊ “ဒီကောင်၊ ကျည်ဆံသာ မကုန်လို့ကတော့ငါတို့ ဘယ်လောက်တောင်သေကြ အုံးမလဲ မသိဘူး” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဇင်ထုံးနော်အောင်သည်၊ ရှမ်းပြည်၊ မုန်ဂူနယ်၊ ဂေါ်န်ဆမ်ကျေးရွာမှ ဖခင်ဆလန် ဇင်ထုံးလဂေါင် နှင့် မိခင် မိတုံ ခေါန်ရှောင်တို့၏ ဒုတိယမြောက်သား ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဖွားရက်မှာ ၁၉၈၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ဖြစ်၍၊ သူအသေခံ စဉ်က ၂၃ နှစ်ပင်မပြည့်သေးကြောင်းသိရသည်။
ဤပြည်တွင်းစစ်ကာလ အတွင်း၊ KIA ရဲဘော်ဇင်ထုံးနော်အောင် ကဲ့သို့ပြတ်သား သော ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ပည့်စုံသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အာဇာနည် သူရဲကောင်းများကို၊ မော်ကွန်းဝင် စာရင်းသွင်း၍ နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အားကျဖွယ် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်လှပေသည်။
Madu Yesu lajang da ai Hparadesu kaw du wa u ga kyuhpyi ya dat ai,,,Amen....
salute !!!!my hero brother....may ur journey be well.
Hkau Naw Awng hte share shagan ni yawng hpe,Kraw salum kata kaw na hkungga jaw let chyeju dum ga ai. Wunpawng amyu sha ni yawngamatu asak ap nawng makawp maga ya ai hpe galoi mung myit dum let, myiprwi hte akyu hpyi dum nga ga ai law. Karai Kasang tuteshaman ya u ga law. Amen.
Hpung-up sara langai
Amyu mungdanamatu karai jaw da aiasak hpe hpyenalata hta nshadu, Karai jaw da ai mungdanamatu asak hkungga nawng lai wa sai myu tsaw ninghkring ni hpe jaw ya ai Karaiachyeju hpe shakawn let Aung badang dawng hkawn gaw alawn nga u ga law.
KK wa n ta hta ban sa nga lu u ga Kanau e.
You have done great job. What you have
ချီးကျူးထိုက်တဲ့အာဇာနည်ဖြစ်ပါတယ် ... အခုအခါမှာတော့ အဲလိုမျိုးနောက် ထပ်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ မတရားသဖြင့် တပ်ထဲကို ၀င်ခိုင်းတယ် မတရားသဖြင့်ဆပ်ကြေးတွေလိုက်တောင်းနေတယ် ... အဲဒီတော့ ဘယ်အရာကို အားကိုးယုံကြည်ရမလဲ အခိုင်အမာဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲ
Du ni e, machyu pala ai n law sam ai kun lo, anhte ni gaw langai tim langai re, ja ja naw myit nna makawp ya marit.
Kawn sam kahtawng hte BU GA masha ni yawng hpe myit dum ai.N,dai hkau AWNGalam mu hti ai ma jaw myit grai n,pyaw tim arawng la n,ngai.Hkai lu hkai sha tam lu tam sha grai yak nga ma dawng kahtawng kaw masha gaw naw nga ma ai kun grai chye ma yu ai.Kawn sam bu ga masha ni yawngan,tsa WA K K tutebau sin ya nga u ga ngu ngai hkai sun sara kaw na kyu hpyi dat ya ai yaw.
GaNau Zin Htung Naw Aung hpyen waalata hte nkam si ai naamyit masin hte myuamatu asak ap nawng ai nang hpe grai hkung ga jaw ai.naawenyi hpe KK hkap tau la na sai.nang gaw myu hte mung danamatu atsam htum hkra asak jaw ap nawng lu sai.naalit hpe nang galaw ngut sai re.labau n-nan ka ai gasi la gying ai share shagan ZIN HTUNG NAW AUNG nang rai sai.rai tim maga mi hku nga yang grai myit npyaw ai,grai lahpawt ai yaw.ganing rai na wa dai shara kaw nang hkrai sha rai taw ai kun i?shang lawt du salang ni yawng hpe san mayu ai.
Ngai nau..,Zing Htung Nau Aung hpe..., Sum tsan Mungdan kaw na, hkung ga jaw dat ai....KIO.KIA..,hte lit ang ai Ningbaw ni...,Tinang Lawu na hpyen ma wa pyi dai zawn re share shagan Myit Masin rawng ai rai yang Nanhte.. lit Ang ai Ningbaw ni graw n-na Zing Htung Naw Aung a-share shagan ai.., Myit marai hta HTAM.. 10.., n-ga graw rawng ra ai lu yaw....,Zing Htung Naw Aung zawn re share shagan ai. Masha ni a-Sumla hpe N-LUNG HTE HKRAK DI N-NA A-TSAWM TAWK N-NA Masha yawng mura ai shara kaw galaw tawn ai baw re....,shagraw ra ai.....,Tup shagraw ra ai...,shi manang ni gaw.. si mat ma a-ni.. hprawng mat ma a-ni...?
မနောမြေစိန် မမှန်တာ တွေရှောက် မရးနဲ့။
ယောင်္ကျားကောင်းတို့ မည်သည် လုပ်ရဲလျင် ခံရဲရမည် သူရဲဘောကြောင်ကာမိမိ ကိုကိုယ်သတ်သေခြင်းသည် သူရဲကောင်းအာဇာနည် အဖြစ်မခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
Myu TSAW NI said...
ခွေးကိုက်တာမခံချင်လို ကွ။သူတောင်းစားမှတ်ထား။sorry sorry သူတောင်းစားလိုမပြောတော့ဘူး သူတောင်းစာသိပ်ခါကျ လိမ့်မယ်။
sorry sorry ခွေးနဲ့မနှိုင်းတော့ဘူး။သိတဲအတိုင်းဘဲ။
Hkau Naw Aung hkai hpa na tawn kau da ai rai.Shi hpe din sang tawn kau ai kun.Kara hku byin mat ai rai.
JINHPAW KASA ni naw htai ra ma rit.Shang lawt du salang ni dai shaloi hpa galaw nga ma ai rai.Lahpawt lama masha laingai mi naasak hpe mi.